#BIM - Revised Course Course (Mechanics, Electricity and Plumbing)
Jiri Revit MEP dọọ, chepụta ma dowaa ọrụ sistemụ gị.
Tinye BIM banye n'ime imewe ube
Nwee ihe osise dị ike
Hazie ọkpọkọ nke gị
Jiri aka gị gbakọọ ndị na-agba edo edo
Chepụta sistemu ikuku ikuku
Mepụta ma dekọọ netwọ eletriki gị
Mepụta akụkọ bara uru na nke ọkachamara
Wetuo nsonaazụ gị na atụmatụ mma n'ime ọkara oge.
Site na usoro a ị ga - amụta otu esi eji ngwa ọrụ ndị a ka usoro nhazi nke sistemụ ụlọ na-arụ ngwa ngwa, arụmọrụ karịa nke kachasị mma.
Newzọ ohuru iji jikwaa oru gị
Revit sọftụwia bụ onye ndu ụwa n’ichepụta ụkpụrụ eji emebe ụlọ na iji BIM (Modeling Information Modeling), na-enye ndị ọkachamara ọ bụghị naanị iwepụta atụmatụ kama hazie usoro ihe owuwu niile gụnyere njiri mara. Revit MEP ka eji etinye ihe eji eme ulo.
Mgbe ị nyefere MEP ihe maka ọrụ, ị nwere ike:
Na-akpaghị aka n'ịwapụta netwọkụ ọkpọkọ
Mee mgbakọọ mgbagha maka nrụgide nrụgide na nrụgide nkịtị
Nye nha nke
Meziwanye nyocha na nhazi nke ikpo ọkụ nke ụlọ
Ngwa ngwa, mepụta netwọọkụ eletrik ụlọ gị
Meziwanye arụmọrụ gị mgbe ị na-arụ ọrụ na ụdị MEP
Anyị ga-esoro usoro ezi uche dị na ya nke ị ga-esi zụlite onwe gị. Kama ịtụle akụkụ usoro iwu nke ọ bụla, anyị ga-elekwasị anya na ịgbaso usoro ọrụ ga-akacha mma ma nye gị ndụmọdụ ụfọdụ iji rụpụta nsonaazụ kacha mma.
Files ga - enwe faịlụ ndị ga - eme ka ị nwee ike ịgbaso ọganihu nke mmụta ahụ site na ebe ị na - ewere na ọ kachasi mkpa site na iduzi gị iji ngwaọrụ ahụ n'onwe gị mgbe ị na - ele klas ahụ.
A na-emelite ọdịnaya ahụ mgbe niile iji tinye mmelite dị mkpa ma ọ bụ isi ihe ndị nwere ike inyere gị aka imeziwanye mmụta gị, ị ga-enwetakwa ha na ozugbo ka ị wee nwee ike melite nkà gị na-aga n'ihu.
N'oge na-adịghị anya dị n'asụsụ Bekee, na AulaGEO
Maka ugbu a, ọ bụ naanị Spanish
Usoro BIM Ọmụmụ BIM Electromechanics Usoro nkuzi
Previous Post«Previous #BIM - Nleta Ntọala Ntọala site na iji Revit
Next Post #CODE - Dynamo N'ezie maka oru injinia BIMNext »